“भारतले माग्दैमा म किन राजीनामा दिने” प्रम ओलि…हेर्नुहोस। – Nepal Online Khabar
“भारतले माग्दैमा म किन राजीनामा दिने” प्रम ओलि…हेर्नुहोस।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट रा,जीनामा दिने या नदिने भन्नेमा दुई सातादेखि चलिरहेको नेकपाको वि,वाद तत्काल स,माधान नभएपछि सहमतिको वि,कल्प खोज्न नेताहरूले थप समय लिने भएका छन् । त्यही कारण शुक्रबारका लागि नि,र्धारित स्थायी कमिटी बैठक औ,पचारिकताका लागि मात्र बस्नेछ । त्यसपछि अहिलेकै विषयमा छलफल गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच बिहीबार भएको छलफलमा पनि अ,डान यथावत् रहेपछि नेताहरू संवादका लागि थप समय लिने नि,ष्कर्षमा पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले असार १४ मा आफ्नो सरकार ह,टाउन भारतीय चलखेल भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा बैठकमा उनको रा,जीनामाको माग उठेको थियो । त्यसपछि वि,वाद उत्कर्षमा पुग्यो । वि,वाद झन् चर्किने भएपछि गत असार २४ गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक सहमतिका लागि एक साता रोकिएको थियो । यो एक सातामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच दुईपटक मात्रै छलफल भयो । बिहीबार तीन नेताबीच ३ घण्टा छलफल चलेको थियो ।
छलफलमा ओलीले आफू स्थायी कमिटी बैठक फेस गर्न तयार रहेको बताएपछि शुक्रबार एक दिनका लागि चाहिँ बैठक बोलाउने मनस्थितिमा नेताहरू पुगेका छन् अध्यक्षद्वयबीच सहमति भएको छैन तर शुक्रबारको बैठक स्थ,गित हुँदैन,बैठकमा केहीबेर सहभागी भएका महासचिव विष्णु पौडेलले भने,तीनै जना नेताले मनका कुरा खोलेर राख्नुभएको छ, सहमति खोज्नुपर्छ भन्नेतर्फ तीन जना नै हुनुहुन्छ । स्थायी कमिटी बस्नुअघि भोलि (शुक्रबार) बिहान दुई अध्यक्ष बस्नुहुन्छ, उहाँहरूका बीचमा अब कुन मोडालिटीमा कसरी जाने भन्ने छलफल होला । शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिका लागि कम्तीमा १५ दिन थप समय लिनुपर्ने सहमति जुटेको बैठक स्रोतको भनाइ छ ।
शुक्रबार बैठक राख्ने, कोभिड–१९ नि,यन्त्रण, लकडाउनपछि अ,स्तव्यस्त जनजीवनलाई सम्बोधन, बा,ढी प,हिरो क्षेत्रमा कार्यकर्ता परिचालनलगायत विषयको एउटा प्रस्ताव पारित गरेर अलि लामो समयका लागि रोकौं भन्नेमा हामी सचिवालय सदस्यभित्र सहमति जुटिसकेको छ, बैठकसम्बद्ध स्रोतले भन्यो,शुक्रबारको बैठकमा नेताहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ हेरौं न ।बिनु सुवेदीले कान्तिपुरमा लेखेकी छन् ।शुक्रबारको बैठक राखेर केही दिन पर सार्ने प्रस्ताव बिहीबार बिहान अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटारमा ओली पक्षइतरका सचिवालय सदस्यहरूले तयार पारेका थिए । ‘हामीले पनि कुनै कारबाही गरेको जस्तो नदेखिने गरी स,माधान निस्किए हुन्थ्यो भन्ने नै सोचेका छौं । कसैलाई का,रबाही गर्ने या कसैलाई जबरजस्ती निकाल्ने भन्ने हाम्रो कुरा होइन, दाहाल–नेपाल नि,कट स्रोतले भन्यो, शुक्रबार बैठकमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह गरेर सबैलाई सहज हुने गरी नि,र्णय गर्छौं ।
Prevभारतीय रक्षा-मन्त्री ल’द्दाख पुगेर भने विश्वको कुनै श’क्तिले हाम्रो भू’मि खो’स्न सक्दैन…हेर्नुहोस् ।
Nextठाेरीमा सुरक्षा बढाऔं ,भारतकाे ठुलाे चलखेल हुन सक्छ !
२ किलो युरेनियमसहित चार जना बौद्धबाट पक्राउ
फिनल्याण्डमा यी १६ वर्षिया किशोरी प्रधानमन्त्री सबै चकित ! एकै दिन्मा यसो गरिन…हेर्नुहोस् ।